CPCA က တရုတ် စွမ်းအင် ယာဉ် လုပ်ငန်း သစ် သိသိသာသာ တိုးတက် လာကြောင်း အစီရင်ခံ - Pandaily
Feb 15, 2022, 13:53ညနေ 2022/02/15 14:12:05 Pandaily
တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော အချက်အလက် အသစ်များတရုတ် ခရီးသည်တင် ကား အသင်းယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြည်တွင်း ခရီးသည်တင် ကား လက်လီ ရောင်းချ မှုသည် ၂. ၀ ၉၂ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် ကထက် ၄. ၄% ကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စွမ်းအင် ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် အသစ်သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင်စတင် ခဲ့ပြီး၊ ဇန်နဝါရီလတွင် လက်လီ ရောင်းချ မှု ၃၄ ၇၀၀၀ အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၃၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်တွင် နွေ ဦး ရာသီ ပွဲတော် စတင် ပြီးနောက် ကား ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း များ ရပ်တန့် သွား သဖြင့် စားသုံး သူများ သည်ကား အသစ်များကို ရက်အနည်းငယ် ကြို တင်၍ ဝယ်ယူ ခဲ့ကြသည်။ CPCA က ဇန္န၀ါရီ အားလပ္ ရက္ ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေရာင္းခ် မႈ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ဆံုး႐ႈံး မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို့ကြောင့် CPCA ၏အမြင် အရ တရုတ် ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် သည် ဇန်နဝါရီလ တွင်ပိုမို အပြုသဘော ဆောင်ခဲ့သည်။
ဇန်န ၀ ါရီလ တွင် ခရီးသည်တင် ယာဉ် ၁၆၉ ၀၀၀ တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၉၁ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပြီး စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ သည်စုစုပေါင်း ပို့ကုန် ၏ ၃၀% ရှိသည်။ ဇန်န ၀ ါရီလ တွင်တရုတ် နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်သော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ် ၁၀၇, ၀၀၀ ကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။
ထုတ္လုပ္ မႈအရ ဇန္န၀ါရီ တြင္ ခရီးသည္တင္ ကား အစီးေရ ၂ ဒသမ ၀၅ ၉ သန္း ထုတ္လုပ္ ခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ ကထက္ ၁၀ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့သည္။ ၎င်းတို့အနက် လွတ်လပ်သော သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်လုပ် မှုသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။
စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် စျေးကွက် အသစ် တွင် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန် ပိုင်းတွင် ဗဟို မှ တင်ပို့ မှုကြောင့် ဇန်နဝါရီလ အစောပိုင်းတွင် ရောင်းအား အားနည်း ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယ နှင့်တတိယ အပတ် များ တွင်သိသိသာသာ တိုးတက်ခဲ့သည်။ Tesla China မှ ၄၀, ၄ ၉၉ စီး၊ SAIC Group မှ ၄၈ ၁၄ စီး နှင့် BYD မှ ၃ ၁၃ စီး အပါအ ၀ င် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၅ ၂၀၀၀ ကို ထို လတွင် တင်ပို့ ခဲ့သည်။
ထို လတွင် ကား အစီးရေ ၁၀၀၀၀ ကျော် လက်ကား ရောင်း ၀ ယ် သည့် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီ ၁၁ ခု ရှိခဲ့ပြီး ၆ ခုမှာ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ လူသိများသော ဥပမာ အချို့မှာ BYD, Tesla China, Xiaopeng, Li Automobile နှင့် Nita Automobile တို့ဖြစ်သည်။ လက်ကား ပမာဏမှာ ၉၃ ၁၀ ၁၊ ၅၉ ၈၄ ၅၊ ၁၂၉ ၂၂၊ ၁၂၂ ၆၈ နှင့် ၁၁၀ ၀၉ အသီးသီးဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:China Civil Aviation Administration: ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏စွမ်းအင် အသစ် ခရီးသည်တင် ကား များ၏ ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ၂၀% ကျော် ခဲ့သည်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ထောက်ပံ့မှု အသစ်များ ပြန်လည် ကျဆင်း ခြင်းနှင့်အတူ လီ သီ ယမ် ကဲ့သို့သော အခြေခံ အရင်းအမြစ် များ၏ စျေးနှုန်း များ သိသိသာသာ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီများသည် ကုန်ကျစရိတ် ဖိအား များနှင့် ရင်ဆိုင် နေရသည်။ သို့သော် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ စျေးနှုန်း များ သိသိသာသာ မြင့်တက် လိမ့်မည်ဟု CPCA က မမျှော်လင့် ပါ။
လေ့လာသုံးသပ် သူများက ဘက်ထရီ ကုန်ကျစရိတ် တိုးမြှင့် ခြင်းကို နည်းလမ်းများ စွာဖြင့် ဖြေရှင်း နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ မော်တော်ကား ထုတ်လုပ် သူများသည် ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် ကိုတိုးတက် စေရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ် ကိုလျှော့ချ ရန်အတွက် ပေးသွင်း သူ များပိုမို မိတ်ဆက် ရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် မကြာသေးမီက မြင့်တက် ခဲ့သော ၄၆ ၈၀ ဘက်ထရီ မော်ဒယ် သည် အနာဂတ်တွင် စျေးနှုန်း ချိုသာ မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။